Ahitana ny vanim-potoanan’ny fibodoana an’i Japana sy ny tantaran’ny fanagadrana ny Japoney-Amerikana ity angon-tsary an-tserasera ity · Global Voices teny Malagasy
Notahirizin'ny Densho Digital Repository ny Angon-tsarim-pianakaviana Theodore Akimoto.
Voadika ny 10 Oktobra 2019 7:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, বাংলা, Français, 日本語, Italiano, Português, English
Ny Angon-tsarim-pianakaviana Theodore Akimoto dia ahitana sary maherin'ny 250 ary nalain'i Theodore Akimoto ny sary sasany tamin'izany, niaraka tamin'ny sary hafa nangonin'ny mpaka sary nandritra ny fotoana niarahany niasa tamin'ny Jeneraly Douglas MacArthur, Kômandy Ambonin'ny Tafika ho an'ny Tafika Mpiara-dia (SCAP) , izay nitondra an'i Japana ho mpanao jadona virtoaly an-taonany maro taorian'ny ady.
Ny Densho Digital Repository no mampiantrano ny Angon-tsarim-pianakaviana Theodore Akimoto, izay mitahiry ireo sary, antontan-taratasy, gazety, taratasy ary ny dosie lehibe momba ireo Amerikana Japoney nampidirina am-ponja tany Etazonia taorian'ny fanombohan'ny Ady Lehibe Faharoa. Nogadraina niaraka tamin'ny fianakaviany talohan'ny nidirany tao amin'ny tafika Amerikana ary lasa niasa tany Japana nandritra ny fibodoana i Theodore Akimoto, teratany Amerikana.
Araka ny filazan'i Theodore (Ted) Akimoto tao anatin'ny fitantarana andian-tsary dia tsy ny sary rehetra ao amin'ny Angon-tsarim-pianakaviana Theodore Akimoto rehetra akory no nalain'i Akimoto tenany fa naka sary ihany koa ny vondrona miaramila isankarazany nisahana ny fanadihadiana ny vanim-potoanan'ny fibodoana taorian'ny ady tany Japana. Eo ambanin'ny lisansa Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License ny sary rehetra.
Tamin'ny fotoana nanafihan'ny Japoney ny Pearl Harbour tamin'ny 7 Desambra 1941, nipetraka tany Los Angeles, Kalifornia ny fianakaviana Akimoto. Nikasa hilatsaka an-tsitrapo hanao raharaha miaramila izy telo miarahaly tao amin'ny fianakaviana dia i Victor, Johnny, ary Ted Akimoto taorian'io andro io araka ny andiany All Things Considered tamin'ny taona 2016 izay nalefan'ny National Public Radio (NPR) any Etazonia. Fotoana fohy taorian'izany anefa, noroahana tamin'ny basy hiala tao an-tranony tao Los Angeles ny fianakaviana ary nogadraina tany amin'ny toby mitoka-monina izy ireo tahaka ireo Amerikana Japoney hafa an'arivony ary very avokoa ny fananany .
Niditra ho anisan'ireo lisitry ny Ekipan'ny Rezimanta faha-442 izy telo mirahalahy ny farany, izay vondron-tafika ahitana ireo zanaky ny Japoney mpifindramonina nanolo-tena hanao fanompoana miaramila ary nanompo tany Eoropa. Maty tany Eoropa i Victor sy Johnny Akimoto raha nalefa tany Japana kosa i Ted taorian'ny ady ho mpaka sary ofisialy an'ny Jeneraly Douglas MacArthur tany Japana.
Mampiseho ihany koa ny angon-tsary fa mbola lavitr'ezaka ny fanatrarana ny firoboroboan'ny firenena sy ny fahombiazana niseho taorian'ny ady tamin'ny fahagagana niroboroboan'ny toekarena Japoney Mbola nijaly tamin'ny vokatry ny tondra-drano, araka ny asehon'ity sary manaraka ity ny faritra ambanivohitra.
Mpitsoa-ponenana Japoney mivoy lakana manavatsava ny tondra-drano ao amin'ny tananakely, tany amin'ny taona 1945-1947 tany ho any. Sary natolotry ny Angon-tsarim-pianakaviana Theodore Akimoto. CC BY-NC-SA 4.0
Mbola nitohy ihany ny faharavana fa tsy nitsahatra tamin'ny taona 1945 izay nahitana ny fandamahana ny tanàndehibe Japoney tamin'ny vanim-potoan'ny ady. Tamin'ny volana Jolay 1948, ravan'ny horohorontany indray ny tanànan'i Fukui izay nanaovana fanarenana lehibe taorian'ny nidarohana baomba azy tamin'ny taona 1945. Nanana anjara toerana lehibe tamin'ny famonjena ny tanandehibe taorian'ny zava-nitranga ny fibodoana nataon'ny tafika Amerikana.
“FEC-48-5331. 28 Jolay 1948. Fukui, iray volana taorian'ilay horohorontany: iray volana taorian'ny faharavana izay nitranga tany amin'ny faritra atsimo Japoney, tanàna amoron-tsiraka, rehefa namely tsy nitsitsitsitsy ny horohorontany sady tsy nampandre ny harivan'ny 28 Jona 1948, efa nampanantena ny fotoanan'ny fanarenana haingana i Fukui. Niaraka tamin'ireo manampahaizana nanombantombana fa enin-taona no ilaina amin'ny famitana ilay asa dia efa nanomboka nanangana indray ny tranony ny Japoney. Mpaka sary- Dargis / Saripika avy amin'ny Army Signal Corps.” Azon'ny rehetra ampiasaina
Nanohy nampianatra ny fakana sary sy zavakanto nandritra ny 30 taona tany amin'ny lisea iray tany amin'ny tobin'ny tafika Amerikana tany Alemaina i Ted Akimoto, ary maty tamin'ny taona 1989. Notahirizin'ny Densho Digital Repository an-tserasera ankehitriny ny Angon-tsarim-pianakaviana Theodore Akimoto.